Ganacsade Abuukar Cumar Caddaan oo xabsi guri la geliyay - Home somali news leader
Home NEWS Ganacsade Abuukar Cumar Caddaan oo xabsi guri la geliyay
Ciidamo ka tirsan kuwa hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa xalay Hoyga uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho kala baxay Ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan.
Sidoo kale Abuukar Cumar Caddaan ayaa sheegay inuu qabo fikir ah in la baaba’sho waxa uu ugu yeeray Gaalada Gafuurka weyn oo ugala jeeday Ciidanka midowga Afrika ee AMIOSM ku sugan Xerada Xalane ee dhex-taalla Garoonka Aadan Cadde.
”Al-shabaab waan taageersanahay mabda’ ahaan raali ayaana ka ahay in la baaba’sho gafuurta weyn ee ku jira xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho” ayuu yiri Ganacsade Abuukar.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Xaaji Abuukar Cumar Caddaan la geeyay guri ay ku ilaalinayaan Ciidamo ka tirsan hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaran ee NISA, wararka ayaa sheegaya in loo ogolaaday dadkii u adeegi lahaa.
Ganacsade Abukar Cumar Caddaan ayaa ku biiraya Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo wadaadka Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo horay dowladda Federaalka Soomaaliya xabsi guri ku heysay.
Previous articleMadaxda Maamul goboleedyada oo loogu baaqay in ay soo magacaabaan xubnaha guddiga doorashooyinka
Next articleCovid-19 curfew threatens to bring down the last curtain on French cinemas